न्वारन गर्न बाँकी दुई प्रदेश, बेनामे कहिलेसम्म? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? प्रदेशका पछाडि नम्बर लाएर कहिलेसम्म बस्ने?
संघीयता कार्यान्वयनपछि देशले विकासमा फट्को मार्ने जनताको अपेक्षा थियो। सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बीनी) ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन्। लुम्बीनीले हालै मात्र नामको ठाउँमा रहेको नम्बर हटाएको हो। प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको पछाडिको नम्बर हटाउन सकेको छैन। प्रदेश २ नाम र राजधानीमै अलमल गरिराखेका छन्। आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धिको सपना कसरी देख्ने ? बेनामे भएर कहिलेसम्म बस्ने ?
ओली दाहालबीच कुरा नमिल्दा १ मा अन्यौंल
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीबारे प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने भए पनि केन्द्रले सहमति नदिएसम्म यसअघिकाले राख्न सकेनन्। लम्बीनी यसको ताजा उदारहण छँदै छ। यसअघिकाले पनि त्यसै गरेका हुन्।
हालसम्म प्रदेशसभाका ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा राजधानी टुंगो लगाए पनि नाम जुराउने कुनै संकेत छैन।
खासगरी सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यस बारे सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभा र सरकार अन्योलमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली कोसी वा सगरमाथाको पक्षमा छन् भने ‘दाहाल किरात प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन्। दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश १ ले कहिलेसम्म आफ्नो न्वारन गर्न सक्छ तयो भने अझैं टुंगो छैन।
मतदान भयो तर टुंगो लागेन
मधेस केन्द्रित दलको सरकार रहेको प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सहमतिमा नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैत महिनामा मतदान भयो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन। सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) र सत्ताइतरका नेकपा, कांगे्रसबीच प्रदेशको नाममा समझदारी कायम हुन नसक्दा नामाकरण अनिश्चित बनेकोे हो।
कांग्रेस र नेकपाले सत्तारुढ जसपाको प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ लाई स्वीकारेका छैनन्। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। चैत ४ गते भएको मतदानले प्रदेश नम्बर २ मा नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशको नामका चार र राजधानीका तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। नाम र राजधानीका पक्षमा आएका कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएन। एक सय सात सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन। ‘मधेश’ शब्दले प्रदेश २ को नामाकरणलाई अहिले जटिल बनाएको छ । अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ ।
नाम र राजधी टुंग्याउन सत्तापक्षले प्रतिपक्षी नेकपा वा कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।
सरकार गठनको बेला राजधानी र नामाकारण सम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै ल्याउने वाचा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका थिए ।
तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेनन्। अझैं पनि नाम र राजधानीबारे कहिलेसम्म टुंगो लाग्ने हो निश्चित छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म न्वारन समेत गर्न नसक्ने प्रदेशबाट धेरै आसा गरेका जनता निरास पक्कै छन्।